कोरोनाका कारण निधन भएकी सुत्केरी महिलाको १५ दिने बालकले आमा खोजेर रुन थाल्यो, हजुरामा काख च्यापेर रूदै हस्पिटलबाट निस्किन (भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कोरोनाका कारण निधन भएकी सुत्केरी महिलाको १५ दिने बालकले आमा खोजेर रुन थाल्यो, हजुरामा काख च्यापेर रूदै हस्पिटलबाट निस्किन (भिडियो)
कोरोनाका कारण निधन भएकी सुत्केरी महिलाको १५ दिने बालकले आमा खोजेर रुन थाल्यो, हजुरामा काख च्यापेर रूदै हस्पिटलबाट निस्किन (भिडियो)
काभ्रेपलाञ्चोक – कोरोना भाइसबाटनिधन भएकी सुत्केरीको नवजात शिशुको दोस्रोपटकको पिसीआर रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ । धुलिखेल अस्पतालले सुत्केरी आमाको कोरोना भाइरसका कारण हप्ताअघिनिधन भएपछि शिशुको दुईपटक पिसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेटेटिभ आएको जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ राम्ेचकी २९ वर्षीया सुत्केरीको कारोना भाइरसका कारण यही जेठ १ गते राति उपचारार्थ सो अस्पतालमा पु¥याइएको केही समयपछि नैनिधन भएको थियो । उनको १४ दिनको शिशुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डा रमेश माकजुले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजै शिशुसहित आफन्तलाई अस्पतालबाट घर पठाइएको (डिस्चार्ज) छ । महिलाको शिशु, श्रीमान् तथा आमा र बहिनीलाई समेत आइसोलेसनकक्षमा राखी उपचार भइरहेको निर्देशक डा माकजुले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार शिशुलाई शुरुका दिनमा हल्का जण्डिस देखिएको र शरीरका आएका स–साना बिमिरा दैनिकरूपमा बालरोग विशेषज्ञको निगरानीले आजसम्ममा निको भएकाले डिस्चार्ज गरिएको हो । शिशुको दुईपटक र मृतक महिलाको आफन्तको पिसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
अस्पतालले डिस्चार्ज भएका शिशुसहितका आफन्तलाई सम्बन्धित जिल्लामा एक हप्ताको क्वारेन्टिनमा राख्न र क्वारेन्टिनबाट डिस्चार्ज गर्नुपूर्व आरडिटी गर्न सुझाव दिएको छ । “यसबीचमा नवजात शिशु वा परिवारका अन्य सदस्यमा कोभिड–१९ का लक्षण देखापरे मात्र पिसीआर परीक्षण दोहो¥याउनुपर्ने हुन्छ”, निर्देशक डा माकजुले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार १० दिनकी महिलाको कोरोनाका कारणनिधन भएलगत्तै उनका शिशुसहित आफन्तको परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी सावधानीपूर्वक आसोलेसनमा राखिएको थियो ।
मृतकका श्रीमान्का अनुसार वैशाख २४ गते महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएकी र २५ गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइ सिन्धुपाल्चोकस्थित घर गएको केही दिनपछि उनीलाई स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएको थियो । बाह्रबिसेस्थित अस्पतालमा आरडिटीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि उपचारार्थ धुलिखेल ल्याइएको परिवारले जनाएको थियो ।
गत शनिबार साँझमात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ती महिला कारोना भाइरसका कारणनिधन भएको पुष्टि गरेको थियो । मन्त्रालका अनुसार कोरोनाबाटनिधन हुने ती महिला नेपालमा पहिलो घटना हो । ती महिलासहित नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारणनिधन हुनेको सङ्ख्या तीन पुगेको छ ।
शिल्पाको पहिलो विवाह बिकास बिसीसँग भएको खुलासा, को हुन त बिकास ( हेर्नुहोस )
श्रीमान र ५ वर्षे बच्चाको बि’जोग बनाएर यी श्रीमती फ’रार ! भक्तपुरबाट एकै दिन दुई जना कहाँ भागे ? (हेर्नुस् भिडियो)
राज्यलाई अरबौं ठ’ग्ने एनसेल बहिष्कार गरौं : रेखा थापा
भारतवाट यसरी लस्करै भित्रिए नेपाली , हजारौं नेपालीको ब्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? ( भिडियो)